रेडियोमा बोल्ने मान्छे, कसरी छाउ बार्नु ? |
रेडियोमा बोल्ने मान्छे, कसरी छाउ बार्नु ?
प्रकाशित मिति :2018-01-22 13:29:21
अछाम । पुसको महिना । रातको १ बजे पहिलो पटक महिनावारी भएको त्यो दिन म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन । यहि समाजमा हुर्के बढेकी म पनि छाउ बार्ने चलनबाट कहाँ अछुतो रहन सक्थे र । उसो त छाउ बार्ने नाममा ज्यानको बाजी राखेर बन्द, होचो ठाउँमा बस्नु राम्रो हैन भन्ने पनि त कहाँ थाहा थियो र !
मम्मि र दिदी महिनावारी भएकै बेला २०६७ साल पुस १ गते म पनि पहिलो पटक महिनावारी भएँ । उहाँहरू घर भन्दा १५ मिनेट टाढा रहेको सार्वजनिक छाउ गोठमा बस्न जानु भएको थियो । मध्य राती त्यती टाढाको गोठमा एक्लै जान सम्भव पनि थिएन । कहाँ जाने, कता बस्ने भन्ने टुंगो नलागेसम्म छाउ भएको कुरा कसैलाई भन्ने आँट आएन । घरमा बुवा, दाजु र भाइ थिए । पहिलो पटक छाउ भएकी छोरीले बुवा, दाई, भाईको मुख हेर्नु हुँदैन भन्ने थियो । त्यसैले मलाई भन्ने आँट आएन । भनौं भने घरमा मम्मि दिदी कोहि पनि थिएनन्, नभनौं भने छाउ भएको बेला घरभित्रै बस्दा आगो लाग्ने, बाघ लाग्ने, देउता रिसाउँछन् भन्ने सुनेकी थिए । म धर्मसंकटमा परे । मलाई लाज भन्दा डरले सतायो । अन्तिममा भन्नैपर्ने लाग्यो । लाज मानिमानि बुवालाई सुनाए । मध्यरात भएकाले बुबाले टाढा जानुभन्दा अंकलको घरको सानो गोठमा बस्ने चाजो मिलाउनुभयो ।
जब म छाउ बार्न पहिलोपटक त्यो सानो, अध्याँरो कोठाभित्र पसे, तब मलाई मृत्यु आफ्नै वरिपरि घुमे जस्तै लाग्थ्यो । जाडो महिना, होचो ठाउँ, धुवाँ बाहिर जाने कुनै ठाँउ थिएन । आजको रात कसरी बाँच्न भन्ने चिन्ता मात्र थियो । तर पहिलो पटक छाउ भएकी छोरीले ९ दिनसम्म त्यसरी नै बस्नुपथ्र्यो । म विवश थिएँ । किनकि सवै छोरीहरूले पहिलो छाउ हुदाँ यसरी नै बारेका थिए । मैले पनि रुँदैरुँदै त्यसरी नै ९ रात कटाएँ ।
समय अगाडी बढ्दै थियो । म अर्को पटक महिनावारी भएँ । त्यति बेला मैले सामूहिक रुपमा बस्ने मौका पाए । २०५४ सालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पिपलतोलीमा निर्माण गरिदिएको छाउ गोठ थियो । त्यही गोठमा म पनि अरु दिदीबहिनीहरूसँगै छाउ बार्न बसेकी थिएँ । त्यहाँ खासै अप्ठ्यारो थिएन । कम्तिमा २२ जना अटाउने ठूलो २ तले भवन थियो । जुन अझंै पनि छ । आफूसँगै पढ्ने गाउँका धेरै साथीहरू हुने भएकाले रातहरू रमाइलो गर्दै बिते । छाउगोठ भित्रै सेल, चाउचाउ जस्ता परिकारहरू बनाएर गफ गर्दै बस्न पाउँदा समय बिताउन धेरै सहज भयो ।
मेरा साथीहरू धनेश्वरी, पुजा, टंकेश्वरी, मोतिसरा, कोकीला, निता, निर्मला, शोभा हामी जहिले पनि सँगै छाउ हुन्थ्यौं । अर्को पटक छाउ भएका बेला के गर्ने भन्ने योजना अघिल्लो महिना नै तयार हुन्थ्यो । पुस, माघको महिना पिपलतोलीमा धेरै सुन्तला फल्थे । ती महिनामा हाम्रो टिमको सुन्तला चोर्न जाने सल्लाह हुन्थ्यो । राती सुन्तला, उखु, अमिलो ल्याएर रात बिताउथ्यौं, त्यही गोठमा ।
एक्लै छाउ भएको बेला भने त्यो गोठमा बस्न डर नै थियो । सदरमुकाम नजिकको गोठ, मंगलसैनकै सबैभन्दा ठूलो पानीधारा पिपलतोली नै भएकाले रातदिन मान्छेको ओहोरदोहोर हुन्थ्यो । बजारका अल्लारे केटाहरू पनि त्यही बाटो हिँड्ने भएकाले के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने डर नै हुन्थ्यो ।
समय बित्दै गयो । सुख,दुःख रमाइलो गर्दै सार्वजनिक छाउगोठमा बसेको ४ वर्ष भइसकेको थियो । एक पटक छाउ गोठमा बसेका हामी सबै जनालाई पेट दुख्न थाल्यो । म धेरै नै विरामी भएकी थिएँ । राती नै अस्पतालमा जानुपर्यो । केहि दिनपछि सञ्चो भएर घर फर्के । त्यही दिन मेरो मनमा एउटा साहस आयो । अबदेखि म छाउ भएको बेला गोठमा जान्न । २÷२ वटा घरको एक कोठामा छाउ भएको बेला बस्न दिएन भने बिद्रोह गर्छु भन्ने आँट पलायो ।
पुजा कोठामा नै जान देउ, भान्छा कोठामा नै जान देउ भन्ने मेरो माग थिएन । मात्र एक कोठामा सुरक्षित बस्न देउ भन्ने माग थियो । तर परिवारले नानाथरी कुरा सुनाउन थाले । गाउँलेले पनि तपाईहरूलाई देउता चाहिन्छ कि छोरी ? भनेर प्रश्न गरे ।
गोठमा नजाने बरु रातभर चिसोमा बाहिरै बस्ने चेतावनी दिएपछि भान्छा कोठामा खाट लगाएर बस्न दिने सहमती भयो । त्यो दिन मेरो खुशीको सीमा थिएन ।
भान्छा कोठामै बसेर छाउ बार्न थालेको करिब २ वर्ष बितेको थियो । त्यसबेला मैले भरखरै रेडियो अछाममा काम गर्न सुरु गरेकी थिएँ । मैले बिस्तारै आफ्नो कोठामा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाले । अरुलाई सम्झाउन त्यति गाह्रो थिएन । हजुरआमालाई सम्झाउन निकै सकस भयो । म रेडियोमा बोल्ने मान्छे, मैले नै छाउ बारेको समाचार पढ्यो भने मेरो लाज होला कि नाईं ? मान्छेहरू के भन्लान ? आफै ठुला कुरा गर्छे, आफै छाउ बार्ने रैछ भनेर दुनियाँले कुरा काट्छन् । मेरो बारेमा तपाईं किन सोच्नु हुन्न ? भन्दै मम्मिलाई बारबार कुरा गरेपछि म आफ्नै कोठामा बस्न सफल भएँ । यो मेरो जीवनको सवैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो ।
अछामलाई छाउले मात्र चिनाउने कि यसको अन्त्य पनि गर्ने हो भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जिल्लामा कति शिक्षक छन्, कति कर्मचारी छन् ? कति नेता छन् ? कति जनप्रतिनिधि छन् ? कति अधिकारकर्मी छन् ? कति पत्रकार छन् ? र तिनीहरूको घरमा छाउ बार्ने अवस्था कस्तो छ भनेर बुझन् जरुरी छ ।
अछाम जिल्लामा २०६३ सालदेखि यता १२ जना महिलाले छाउ गोठमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । यी त बाहिर खुलेर आएका घटना मात्रै हुन् । छाउ बारेकै कारण यसले शिक्षामा पारेको असर, स्वास्थ्यमा पारेको असर, मानसिकतामा पारेको असरका बारेमा पनि अब बहस हुन जरुरी छ ।
चिसो महिनामा झनै धेरै समस्या छ । घरबाट टाढा गोठ हुन्छ, सरसफाइका लागि पानी हुँदैन । धोएको लुगा सुकाउने ठाउँ हुँदैन । ओड्ने ओछ्याउने गतिलो कपडा हुँदैन । धुवाँ बाहिरा जाने ठाउँ समेत सहज हुँदैन । सुन्दा सामान्य लाग्ने धेरै समस्याहरू व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । निसासिएर, निमोनिया भएर, कठ्याङग्रीएर ज्यान गैरहेको छ । छाउ हुँदा आमा र बच्चाले दुधदहि खान नहुने भन्ने गलत मान्यताका कारण महिलाको स्वास्थ्य त खराब हुन्छ नै धेरै बालबालीका कुपोषणको शिकार बन्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा महिला बलत्कारको शिकार हुनु परेको छ ।
समस्या छ भनेर चुप लाग्ने हो भने यो कुप्रथा हट्न अझै दशकौं लाग्न सक्छ । त्यसैले परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ । अछामलाई छाउले मात्र चिनाउने कि यसको अन्त्य पनि गर्ने हो भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जिल्लामा कति शिक्षक छन्, कति कर्मचारी छन् ? कति नेता छन् ? कति जनप्रतिनिधि छन् ? कति अधिकारकर्मी छन् ? कति पत्रकार छन् ? र तिनीहरूको घरमा छाउ बार्ने अवस्था कस्तो छ भनेर बुझन् जरुरी छ ।
२०७५ साल भदौ महिनाबाट लागु हुने छाउपडि कुप्रथा ‘फौजदारी अपराध’ लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
(पत्रकार ढुंगाना अछामबाट कान्तिपुर दैनिमा समाचारदाता हुनुहुन्छ)
-कल्पना नेपाल आचार्य- कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार छौँ । आफू जलेर आफ्ना चाहाना, खुशीहरुलाई